Home News Saraakiisha Ciidamada Dowlada ee Gobolka Sh/hoose oo sheegay uu ka go’ay Saadkii
Saraakiisha Ciidamada Dowlada ee Gobolka Sh/hoose oo sheegay uu ka go’ay Saadkii
Iyadoo dowladda soomaaliya ay xilli kala duwan ay ku dhawaaqday dagaalka dhan ah ururka al shabaab ayaa hadana waxaa jira cabashooyin ka imaanaya saraakiisha ciidamada xoogga dalka maadama aysan heysan saad ku filan oo ay kula dagaalamaan ururka al shabaab.
Wadamada kala duwan ayaa soomaaliya waxa ay ka caawiyaan sidii loola dagaalami lahaa ururka al shabaab iyagoo dowladda soomaaliya ka cawaaiya dhinacyada mushaaraadka, saadka ciidamada, dareesyada ciidamada iyo dhinacyo kale.
Balse madaxda dalka ayey gacantooda kusoo dhacdaa deeqaha loogu talagalay ciidamada iyagoo isdaba marin ku sameeya kuna fulista danahooda gaarka ah.
Taa badalkeeda ciidamada xoogga ee jooga furumaha dagaalka ayaa ka cabanaya saad la’aan iskaba daaye in ay helaan mushaaraadkoodii oo ay ku tumanayaan madaxda.
Saraakiisha ciidanka xoogga ee Gobolka Sh/hoose ayaa iyagu warbaahinta la wadaagay in haatan uu ka go’ay saadkii sidaa daraadeedna ay ku dhaw yihiin iney isaga soo baxaan furumaha hore ee dagaalka.
Mid kamid ah Saraakiisha Ciidamada Dowladda ee sh/hoose ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadu ay wadaan howl-galka lagu xoreeynayo Gobolka Sh/hoose isla markaasina ay Gacanta ku dhigeen dhowr dagmo oo ka mid ah Gobolkaasi isaga oo intaasi raaciyay inaysan helin daryeelkii ay uga baahnaayeen dowladda Soomaaliya.
Sarkaalka ayaa xusay in Ciidanku ay dadaal ugu jiraan xaqiijinta amaanka dagmooyinka Gobolka ee Dowladda Gacanta ugu jira qaarkoodna waxa uu tilmaamay inay wadaan Howl-galka al shabaab looga xoreeyn lahaa ee ay dowladu ku dhawaaqday xili uu sheegay inaysan helin kuwa dagaalka ku dhaawacmay daryeel Caafimaad oo ku filan.
Previous articleSomalia: Former minister and Villa Somalia candidate elected as new SW state president
Next articleCiidamada Dowlada iyo Al-shabaab oo ku dagaalamay deegaano hoos-tago Balcad
Goobta la geeyn doono Burcad badeeda oo la shaaciyay
Somaliland celebration in Edmonton now eyed for August